IML တံဆိပ် Flexo ပုံနှိပ်စက်
IML တံဆိပ်နှင့်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် Flexo ပုံနှိပ်စက်ညွှန်ကြားချက် - ၁. ပုံနှိပ်ခြင်းအရောင် - ၆-၁၀ အရောင်များ (လွတ်လပ်စွာတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်း)၊ ဥပမာ - ၈ + ၇ ၇ + ၁ ၆ + ၂ ၅ + ၃ ၄ + ၄ ၂ မက်စ်။ စက်မှုမြန်နှုန်း: 130m / min 3.Max ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း: 120m / min 4.Reticulated လှံတံ: ကြွေ roller 8, ပိတ်ထားသောခြစ် 8 အစုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ 5.Accuracy: ဒေါင်လိုက်± 0.25 မီလီမီတာ (လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး) 6.Broad ပညာရှိ: ± 0,15 မီလီမီတာ (လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး) 7.Max ။ အလှည့်အချင်းပစ္စည်း: Φ800မီလီမီတာ 8.Ai ...
Die- ဖြတ်တောက်ခြင်းစခန်းသုံးခုနှင့်အတူ Flexo ပုံနှိပ်စက်
သေဆုံးသောသုံးခုရှိသော Flexo ပုံနှိပ်စက်အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ၁။ မှင်လွှဲပြောင်းရန်ကြွေ anilox ဆလင်ဒါကိုယူပါ။ 2.Each ပုံနှိပ်ယူနစ်တစ်ခုတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီပြားချပ်ချပ်ညှိနှိုင်းသည်။ သေဆုံးဖြတ်တောက်သောစခန်းသုံးခု၊ ပထမနှင့်ဒုတိယသေဆုံးဖြတ်စက်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ တတိယသေဆုံးဖြတ်စက်ကို sheeter အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ 4. ကွန်ပျူတာကွန်ရက်လမ်းညွှန်စနစ်ကိုပုံနှိပ်ယူနစ်၏ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်ပစ္စည်းများကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်အမြဲထားရှိစေသည်။ (စံပုံစံညှိခြင်း) ၅ ။
XHR စီးရီး Flexo တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက် Flexo တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်၏ပုံနှိပ်ခြင်းနိယာမသည်မြင့်မားသောတိကျသော anilox roller မှပန်းကန်သို့၊ ထို့နောက်ပန်းကန်မှပုံနှိပ်ပစ္စည်းသို့လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထည်၊ ဖဲကြိုးများနှင့်စက္ကူလိပ်များတွင်ထူပြီးအစိုင်အခဲမှင်အလွှာနှင့်ကောင်းမွန်သောအစာရှောင်ခြင်းဖြင့်တည်ငြိမ်။ မြန်နှုန်းမြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောမြန်ဆန်ခြင်း။ ပုံနှိပ်ခြင်းအရှည်ကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပန်းကန်ဆလင်ဒါအစားထိုးနိုင်သည်။ စက်ကဝိုင်ယာ ...
ပုံစံအသစ် Flexo ပုံနှိပ်စက်
Multicolor flexo တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုလွန်စွာမှယခင်စီးရီးများ၏ထူးခြားသောအက္ခရာများကိုအမွေခံရုံသာမက non-stop register နှင့် pneumatic clamping ယန္တရားအသစ်များကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရှေးဟောင်းပုံစံ flexo စက်မှတီထွင်ခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်သောပုံနှိပ်အရည်အသွေးနှင့်ပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှု။ နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter မော်ဒယ်ပုံနှိပ်အရောင်စုစုပေါင်းပါဝါအလေး (L * W * H) MM XHRQ-212+ 1 6KW 800KGS 1835X946X1680 XHRQ-41 ...
မြန်နှုန်းမြင့် Rotary တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်စီးရီးဒီစီးရီးစက်သည်အထည်တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်များကြားတွင်ဂန္ထဝင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဓေလသစ်ပန်းကန်ကိုစက်တွင်အသုံးပြုသည်နှင့် o set လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်၎င်းသည်တည်ငြိမ်။ တိကျသော， ရောင်စုံရောင်စုံနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးပုံနှိပ်ပြီးသောအထည်နှင့်စက္ကူတိပ်ပြားများကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ စက်၏ပုံနှိပ်အရည်အသွေးသည်ပစ္စည်းများ၏တင်းမာမှုနှင့်မတူပါ။ ပုံနှိပ်ထားသောစာလုံးသေးများသည်ရှင်းလင်းပြီးပြည့်စုံပြီးမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းသည်ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့် Rotary Press
မြန်နှုန်းမြင့် Rotary Press (Shaftless Plate Fitting) ပင်မနည်းပညာအချက်အလက်များစက်ဘယ်ဘက်မှညာသို့ပုံနှိပ်အရောင်များ 6-10 COLORS Max ။ Web အကျယ် 1000 mm Max ။ စက်မြန်နှုန်း 150 m / min (￠ 150mm plate cylinder) Max ။ ပုံနှိပ်မှုနှုန်း 130 m / min (￠ 130mm plate cylinder) မှတ်ပုံတင်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှု±0.1㎜ （အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည့်စနစ်） reel dia ပြန်လှည့်ခြင်း ￠ 650㎜ပြန်လည် reel di ...